Wasiirka Maaliyadda “Dabagal ayaan ku samaynaynaa Dhaqaalaha Soo gala Safiiradeena Caalamka” – Radio Daljir
Juunyo 9, 2018 10:47 b 0
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa sheegay inay dabal ku samaynayaan dhaqaalaha usoo xarooda safiirada Soomaaliya ay ku leedahay caalamka, kuwaasi oo aan samayn wax xisaab celin ah, badalkeedana mushaar kasoo raadsada dowladda Soomaaliya.
Wasiirka oo ka hadlayay shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii dowladeed ee Soomaaliya inuu siwayn u saameeyey safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay caalamka, isagoona ku tilmaamay wax aan socon karin in dhaqaalle mushaar ah lasoo raadsado iyadoo dakhliga ay helaana aan dowladda usoo xarayn safaaradaha.
“Runtii safaaaradaha inoo furan ayaa waxa ay yihiin kuwo bar madow ah taasna ay sabab u tahay dhibaatada iyo burburka dalka ka dhacay,balse waxa muhiim ah maxaa dhaqaalo ah oo soo gala safaaradahaas,dalalka ay safaaradaha ka furan yihiin Kirada Guriga ma bixiyaan,imiska lacag ah ayaa soo gasha?Shaqalaha ka Shaqeeya imisa ayay gaarayaan intaas oo dhan ayaan qorsheyneyna ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay inay hubin doonaan shaqaalaha safaaradaha ka shaqeeya tiradooda iyo tayadooda.
QM oo Ka Digtay Nafaqo- darro kusoo wajahan inka badan Hal milyan oo Carruur Soomaali ah